Xog-Rooble oo Rumeystay Digniin amni oo xafiiskiisa horay loo siiyay iyo Sarkaal Kashifay Weerarada. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Xog-Rooble oo Rumeystay Digniin amni oo xafiiskiisa horay loo siiyay iyo Sarkaal...
Bilihii August ilaa November ee sanadkii dhamaaday 2021, ayaa xog ay warbaahinta qaar heshay waxaa lagu faafiyay in ra’iisal wasaare Rooble loo gudbiyay macluumaad ku saabsan in ay jiraan weeraro qaraxyo ah oo lagu bartilmaameedsanayo isaga iyo xubnaha ugu dhaw ee xafiiskiisa,
Sida ay xogta tilmaameyso waxaa arintaasi Rooble la wadaagay Korneel Cabdullahi Daahir oo Cabdullahi Dheere ku magac dheer kuna magacaab madaxa mukhaabaraadka ahna taliyaha dabagalka NISA, muddana saaxiib dhaw la ahaa Farmaajo iyo Fahad.
Cabdullahi Dheere ayaa la ogaaday inuu toos kulan uu la qaatay Rooble ugu wargeliyay inuu digtoonaado, una digo ragga ka tirsan xafiiskiisa, waxaana xilligan muuqaneysa in ra’iisal wasaaruhu xilligan ku baraarugay weerarka lagu bartilmaameedsanayo garbihiisa ee Muqdisho sida isdaba joogga ah uga socda.
Weerarkii ugu danbeeyay oo lagu qarxiyay Maxamed Ibraahim Macalimow waxaa ka horeeyay laba qarax kale oo mid lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika, halka mid kalena lagu qaarijiyay Gabar iyo wiil kamid ahaa howladeenada xafiiska Ra’iisal wasaaraha.
Taliyaha dabagalka NISA, Korneel Cabdullhi Dheere ayaa bilooyinkii u danbeeyay ah sarkaalka kaliya ee isagoo dalka jooga ka diga weerada siyaasadeysan ee mas’uuliyiinta lagu dilayo, waxaana soo labeeya taliye ku xigeenkii hore ee NISA Gen Cabdalla Cabdalla oo isagoo Nairobi jooga ka digay qorshayaasha amniga lidka ku ah.
Rooble ayaa la tilmaamay in saacidhii la soo dhaafay uu kulamo la qaatay saraakiil ciidan oo qaar ku heyb yihiin isagoo muujiyay wal walka amni ee dul saaran xafiiskiisa.
Dhinaca kale waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in Maraykanka uu wado qorshey ku wajahan amniga iyo doorashada Soomaaliya, waxaana xukuumadda Washington toos uga soo horjeedaa Farmaajo iyo Fahad, iyadoona Rooble ay garab taagan yihiin,
Tilaabadan ayaa sidoo kale keentay in casuumaad uu Maraykanka ku tagayo Taliyaha dabagalka Cabdullahi Dheere ka helo Xamse Warfaa oo dhawaan uu Madaxweynaha Maraykanka Biden u magacaabay taliyihiisa arimaha dibadda iyo bini’aadanimada.
Xamse Warfaa ayaa siyaasadda Maraykanka ee Soomaaliya riixaya, waxaana ay ehel yihiin oo uu wax badan sida la rumeysan yahay kala soo hadlayaa taliyaha dabagalka ee dhawaan Maraykanka safar ku tagaya.
Rooble iyo Farmaajo khilaafka ka dhaxeeyay kaliya ma uusan saameynin doorashada ee sidoo kale dhinaca amniga ayaa aad looga dareemay, waxaana falalka amni darro naftooda ku waayay dad badan oo qaar mas’uuliyiin yihiin halka qaar kale oo badan ay xubnahooda ku waayeen oo dhaawacyo la jiifaan.
Previous articleSaraakiil ka tirsan NISA oo warqad Xasaasi ah u diray R/W Rooble.
Next articleBoobka doorashada maxaa u xal ah?